Ndingawanepi Ini Kutsiva Yangu iPhone Screen? Gadzirisa Izvo Nhasi! - Iphone
ford sync wont play mumhanzi kubva kuUSb
maitiro ekugadzirisa nhema screen pane ipad 2
sei kubatanidzazve bluetooth mudziyo
iphone yekubata skrini isiri kushanda mushure mekuvandudza
Ndingawanepi Ini Kutsiva Yangu iPhone Screen? Gadzirisa Izvo Nhasi!
Yako iPhone skrini yakaputsika uye iwe unofanirwa kuitisa kuti igadziriswe. Nekudaro, iwe hauzive kwekuwana kuti igadziriswe kana kuti ndezvipi zvaunogona kusarudza. Muchikamu chino, ini ndichapindura mubvunzo - ndekupi kwandinogona kutsiva yangu iPhone skrini ?
Ndekupi Kwandinga gadzirise Yangu iPhone Screen?
Kana yako iPhone skrini yakanganisika, yakatsemuka, kana kuputswa zvachose, iwe unowanzo kuve nesarudzo ina dzekugadzirisa dzaunosarudza kubva ku: Apple, Puls, iri pedyo yekugadzirisa iPhone chitoro, kana DIY.
Ichi chinyorwa chichafamba iwe kuburikidza neese ega eaya mana sarudzo, ichijekesa zvayakanakira nezvayakaipira yeimwe neimwe kuti iwe ugone kuita yakanakisa sarudzo kana iwe uchifanira kutsiva yako iPhone skrini.
Kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare +, Apple Store ichave iri yako yakachipa yekugadzirisa sarudzo. Uchazobhadhariswa madhora makumi maviri nemapfumbamwe chete ekutsiva chinovhara kuApple Store kana yako iPhone yakachengetedzwa neAppleCare + . Kana yako iPhone isina kuvharwa neAppleCare +, uri kutarisa kugadzirisa uko kuchadhura kanosvika $ 129 kana zvimwe zvakanyanya zvichienderana neiyo iPhone yauinayo.
Chimwe chinhu chekufunga nezvacho ndechekuti Apple haitsive masikirini eiyo chero iPhone akagadzirwa pamberi peiyo iPhone 6. Saka, kana iwe uine yekare iPhone, Apple inogona kusakugadzirira iwe.
Uyezve, kana chimwe chinhu chakatyoka kana kukuvara, iwe uchafanirwawo kuwana icho chikamu che iPhone yako chakagadziriswa. Nekudaro, kana iwe ukadonhedza yako iPhone uye yayo yakavhenekwa yapwanyika, usashamisika kana chimwe chikamu che iPhone yako chakatyoka futi. Izvi hazvishamise, kunyanya kana yako iPhone skrini yapwanyika pawakawisira pasi pakaoma sekrete yemugwagwa.
Kana iwe uri kuronga nezvekutora yako iPhone's skrini inotsiviwa paApple Chitoro, ini ndinokurudzira zvikuru kuronga musangano chekutanga. IApple Chitoro inogona kubatikana chaizvo mukati mezuva, uye kutsiva kwechidzitiro kunogona kutora chinguva kuti upedze, kuti iwe ugone kumira wakamira wakakomberedza zuva rese kana iwe ukasaronga musangano.
Kana iwe uchida kudzivirira rwendo kuenda kuGenius Bar, Apple zvakare ine tsamba-mukugadzirisa basa. Iyo yakadzikira kune Apple's-mail service ndeyekuti iwe unenge usina yako iPhone kweanenge mazuva mashoma, sezvo nguva yekushandurwa kwaApple inowanzo kuve mazuva 3-5.
iphone haigone kuongorora server server
Puls iPhone Screen Kutsiva
Yedu inofarira iPhone yekugadzirisa kambani iri Pulse , se-pane-yekuda sevhisi iyo inotumira anozivikanwa tekinoroji kwauri . Nyanzvi ichagadzirisa yako iPhone ipapo, kunyangwe uri kubasa, kumba, kana kuresitorendi yemuno.
Puls yakanaka kana iwe uchinge uchinge uchida kugadziriswa nekukasira nekuti ivo vanowanzo tumira tekinoroji kwauri mumaminetsi makumi matanhatu kana mashoma.
Puls skrini inotsiva kazhinji inodhura $ 79, asi iwe unogona kushandisa yedu yega Puls kopani kodhi PF10ND18 kuchengetedza 10% pane yako kugadzirisa!
Pedyo ne iPhone Kugadzira Zvitoro
Imwe sarudzo yaunayo kana iwe uchida kutsiva yako iPhone skrini ndeye kuenda kunzvimbo yemuno yekugadzirisa iPhone. Zvitoro zvekugadzirisa zvemuno zvinowanzo kupa mitengo yakaderera pane iyo Apple Chitoro (kana yako iPhone isina kuvharwa neAppleCare +), asi unofanirwa kungwarira usati waunza yako iPhone mukati.
Paunotora yako iPhone mune yekuchenesa shopu yemuno, hauzive kuti ndiani ari kutsiva sikirini yako kana kuti ndezvipi zvikamu zvavari kushandisa. Kazhinji yenguva, shopu yemuno yekushandisa inoshandisa zvisiri zveApple zvikamu, izvo zvinonyatsa kubvisa yako AppleCare + garandi. Saka, kana chimwe chinhu chikatadza, hapana zvakawanda chaizvo zvaunogona kuita.
Kazhinji, isu hatikurudzire kuti yako iPhone igadziriswe pane iri pedyo yekugadzirisa shopu. Kana iwe uchifunga kuti yako yekutengesa yekuchengetera shopu ndiyo yako yakanaka sarudzo, ita shuwa kuti utarise ongororo yekambani kutanga!
iphone xs haidzime
Tsiva Iyo Screen Iwe Pachezvako
Imwe sarudzo yauinayo iri kuedza kutsiva yako iPhone skrini iwe pachako. Nekudaro, kunze kwekunge iwe kana shamwari uine ruzivo rwekutanga-ruoko kugadzirisa maPhones kana kutsiva masikirini, ini handikurudzire kuedza kuzviita wega.
Kugadzira iPhone kunoda hunyanzvi hwakawanda uye yakakosha toolkit isina vanhu vazhinji. Izvo zvemukati zvemukati zve iPhone yako zvidiki uye zvakaomarara futi - kana iwe ukaisa chinhu chimwe kubva panzvimbo, unoisa njodzi yekutyora zvachose yako iPhone.
Unogona kudzidza zvakawanda nezve kugadzirisa yako iPhone's skrini wega nekutarisa chinyorwa chedu.
Tsika dzenyaya : kunze kwekunge iwe uri nyanzvi, pamwe haufanire kuedza kutsiva yako iPhone skrini wega.
Screen Kutsiva Yakagadzirwa Nyore!
Ndinovimba chinyorwa ichi chakabatsira kupindura mubvunzo, 'ndingaendesa kupi yangu iPhone skrini?' zvako. Iwe une dzimwe sarudzo dzakanaka dzekugadzirisa, saka pakupedzisira zviri kwauri kuti usarudze iyo yakakunakira iwe. Kana iwe uine chero imwe iPhone kana skrini yekutsiva mibvunzo, inzwa wakasununguka kusiya mhinduro pasi pazasi!